Fanaraha-maso Fivarotana Fividianana Fitaovana Anti Barking Fitaovana famerenam-bokatra sy mpamokatra - orinasa China, Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Home > Products > Tsy misy bark Collar > Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra > Fifehezana collar fanofanana azo tanterahina anti-barking
Fifehezana collar fanofanana azo tanterahina anti-barking
Izahay dia mamatsy fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny fanenjehana ny alikaola. Ny alàlan'ny mpitsikilo manan-tsaina hanivana ny tabataba tsy misy ifandraisany - tafiditra ao anatin'izany ireo alika tsy lavitra, ka izany no manakana tsy hisy volon-koditra tsy hamitaka azy. Mpanamboatra matihanina sy mpanondrana isika, napetraka tamin'ny Jan.2011, orinasa 2600 metatra toradroa, mpiasa 120, manana fahaiza-manao fampandrosoana sy fikarohana, nanolo-tena ho tonga orinasa avo lenta indrindra amin'ny famatsiana biby fiompy.
Fomba fanaraha-maso ny alikaola amin'ny alàlan'ny famatsiana alim-boly amin'ny alikaola
1.Produksi ny fampidiran'ny famoriam-bokatra fanatanjahantena fanatanjahan-tena anti-barking
Ny Collar Anti-Barking Device dia mampihena tanteraka ny fandehanana entana, tsy mampisy fanaintainan'ny alika na alahelo anao. Mampiasa fampiroboroboana fanitsiana tsindraindray, dia manampy amin'ny fampijanonana ny fitabataban'ny alika amin'ny famoronana fikambanana hahalala ny alika.
2.Product Parameter (spétrication) amin'ny fifehezana collar fanofanana azo tanterahina anti-barking
Anarana amin'ny zavatra Fitaovana fanaraha-maso amin'ny alikaola ny alika amin'ny alika
Item No. TZ-PET680S
Material (Fampitandremana feo + Fampihorohoroana)
-tsindrio + - bokotra hanitsiana ny fahatsapan-tena
Tranonkala poliôla avo lenta miaraka amina fehiloha vita amin'ny halatra 2
Azonao atao pirinty ao anaty fitahirizana ny marinao
New Design Lamaody maoderina, azo antoka ary tsy misy ravin-damba miforitsoroka miaraka amina tranokala 2 Reflective
Toetoetra 1. Mora ampiasaina sy fitsapana
2. Fanitsiana bokotra amin'ny haavo 7 fahatsapana
3. 1-2 fotoana mampitandrina ny feo ary 3-7 heno +
4. Ny fotoana manafintohina dia hitombo amin'ny fotoam-piofanana
5. Ampidiro ny fomba fiarovana fiarovana 1 minitra aorian'ny fiasana in-7
6. Ny tondro maivana dia midika fa miasa izy.
7. Mandaitra amin'ny alika 10 ka hatramin'ny 55kg.
8. Famolavolana patanty
9. Fehin-kibo mainty poloney mainty avo lenta miaraka amina ravin-doko misy refiny 2, manitsy amin'ny 35 ~ 60cm
Size Haben'ny sokajy: 7,6 * 2,5 * 4cm (2.99 * 0.98 * 1.57 santimetatra)
Boaty fanomezana: 8 * 4.3x10cm (3.15 * 1,7 * 3.95inch)
Lehibe: 49x43x24cm (19.3x17x9.5inch)
G.W / N.W: 13 / 12.5kgs
Accessories 1 x Collar;
1 x Belt; 1 x 6V Batterie;
2 Sets of Metal Probes;
Jiro Fahazavana 1; 1 x Boky Torolàlana
Certification Ny vokatra ataonay dia mampiasa fitaovana maitso amin'ny dingana famokarana rehetra, ary araka ny fanamarinana CE ROHS
3.Produksi endri-javatra sy fampiharana ny fifehezana ireo kitapo fampiofanana fampiofanana anti-barking
Collar Device Anti-Barking Device Miaraka amin'ny ambaratonga feo sy fampitandremana azo antoka 7 azo antoka, tsy misy ratra fiofanana amin'ny alika. Misafidiana haavo mora sy modely mety ho an'ny alikanao ary ajanony tsara ny fandehanana tsy an-kanavaka amin'ny alika kely na lehibe. Farany, ho azonao atao ny manitsy ny fihetsiky ny alikanao amin'ny tsara fa tsy misy fehikibo miendrika hodi-biby!
4.Production antsipirihany momba ny fifehezana ireo kitapo fampiofanana azo zahana amin'ny fanamboarana anti-barking
Fehin-kibo mety vita
Fehin-kibo mety vitafrom 35~60m, suitable dogs from 10-55KG.
Na alika na alika lehibe ny alikanao, mety hifanaraka tsara azy ireo ny voarindran'ny lozisialy mitsitsy.
Ny goavam-be vy dia afaka miaritra ny mahery, fiantraikan'ny alika lehibe sy lehibe.
Ny fehin-kibo nilona avo lenta miaraka amin'ny tsipika feno taratra dia mora zaka. Miverena milamina ny sainao raha tsy manimba ny alikanao.
Amin'ny voalohany, ny Stop Barking Collar dia mampiasa fehezanteny fohy fampitandremana. Raha misy paoma faharoa mitranga ao anatin'ny iray minitra, dia misy feo mafy kokoa. Manomboka amin'ny akony faha-3 ka hatramin'ny faha-7, dia misy feo mafy miaraka amin'ny fahatairana iray. Raha mijanona mandritra ny 1 minitra ny biby fiompinao dia miverina miverina amin'ny haavon'ny fanitsiana ny fehezanteny «Shock Bark Collar». Ho fiarovana ny alika, raha tonga hatrany amin'ny haavon'ny faha-7 ny fampiroboroboana, dia hitsahatra ny asa mandritra ny 1 minitra.
5.Product Qualification of Fanaraha-maso amin'ny fananganana fiaramanidina fanamafisana entona fanamafisana
6.Deliver, fandefasana ary serivisy fifehezana baiko fanamboarana fiaramanidina anti-barking
Ho an'ny baiko maika, azontsika atao haingana kokoa, alefaso azafady ny mailaka mba hiresaka.
F: Manome fotoana
A: Didy fenitra: tokony ho 7-10 andro aorian'ny fanamafisana ny fandoavana ny petra-bola.
A: 1-2 andro fiasana aorian'ny fanamafisana ny fandoavana ny santionany.
A: 1.Ny fanekena.
2.Ny mpanjono dia mandefa ny 50% -n'ny tahiry taorian'ny nahazoantsika ny PI.
3.Maneken'ireo tompon'andraikitra ny santionany ary mahazo ny tatitra momba ny fitiliana raha ilaina izany.
4.Manamboatra ny famokarana faobe.
5.Manamboatra fandefasana entana.
6.Supplier dia mandamina antontan-taratasy ilaina amin'ny fanondranana sy fandefasana ary alefaso any amin'ny mpanjifa.
7.Nanome ny mpanjifa ny fifandanjana alohan'ny fandefasana.
8. Atolory ny mpanjifa ny fanaraha-maso rehefa avy mandefa ny entana.
Hot Tags: Fifehezana ireo kojakoja fampiofanana azo zahana namboarina anti-barking, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita manokana, varotra, mora vidy, lafaoro, fanamboarana, Quotation, vidiny, pricelist
Volavola Bark amin'ny alikaFiarovana ny biby fiompy biby fiompy biby fiompyVoarindra amboaram-piofanana azo alika7 Loza fanatanjahan-tena ambaratonga fanatanjahantena
Ajanony ny fanamafisana ny fividianana varotra anti-barking tsy misy taolana lava
Varotra fanenan'ny alika dia tsy misy famolavolana baikoan'ny anti-barking
Solika elektrika biby kely alika amin'ny alikaola